ဝတ္ထုတို/ဝတ္ထုရှည် | လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း
ယောဟန်အောင် – အရပ်ပျက်မလေး
in: ဒီလဖတ်စရာ, ရသကဏ္ဍ, ဝတ္ထုတို/ဝတ္ထုရှည်
. (၁) ဒီ ဖြစ်ရပ်အကြောင်းလေးက ကျနော့စိတ်ထဲ စွဲစွဲထင်ထင် ရှိနေတယ်။ တချိန်ချိန်တော့ အကြောင်းသင့်ရင် စာရေးဖြစ်မယ် တေးထားပေမယ့်လည်း မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ အခု စကားဝိုင်းမှာ ဒီဖြစ်ရပ်ကလေးကို ပြန်ပြောပြမိတယ်။စကားဝိုင်းက မထင်မ ...
ငါးတကောင်ရဲ့ရီဗော်လူးရှင်း – နိုင်ဝင်းသီ
.မဏိစန္ဒာလေးကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့သော နေရာမှာ သရပါ တံခါးအနီးတွင် မဟုတ်ပါ။ ထိုနေ့က ညသည် ခါတိုင်းနေ့တွေထက် အနည်းငယ်စောပြီး မြို့ပြထဲသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သော်လည်း မြို့ပြ၏အရိပ်နှင့်အရောင်များ၊ မြို့ပြထဲမှ ရနံ့များ၊ မြို့ပြ၏ ညဦးပိုင်း အဆင်အပြင်များမှာ ခါတ ...
တောင်ပေါ်သူရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပုံပြင် – ပွင့်သစ်(ကရိန်ကန်)
. ၁။ အဲဒီနေ့ကို ကျမ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် အမှတ်ရနေမှာပါ။ ကျမအသက်က ခပ်ရွယ်ရွယ်။ ကျမတို့ရွာထဲ စစ်ကြောင်းတကြောင်းဝင်လာတယ်။ ဒီကိစ္စက သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားတဲ့ အရပ်ဆိုတော့ အစိုးရစစ်ကြောင်းရော၊ ကျမတို့လူမျိုးတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ စ ...
စိတ်အလို လိုက်မိတဲ့ သောက နောင်တ – ဏီမိုးဝေ
.တဝမ်းတခါးအတွက် ဆင်းရဲပင်ပန်းကြီးစွာ ရှာဖွေစားသောက်နေရတယ်။ တနေ့နဲ့တနေ့ အလျင်မီအောင် ရုန်းကန်နေရတယ်။ ဘဝကကြမ်းတယ်။ အတိတ်ကံနည်းခဲ့တော့ အကျိုးပေးကလည်း မကောင်းဘူး။ ရေရှည်ပါးစပ်လှုပ်ဖို့အတွက် ဖျစ်ညှစ်ပြီး လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်လေးဝယ်လိုက်တယ်။ အရပ်ထဲက ဦးချ ...
မြနှောင်းညို –အမြတ်တနိုး လက်ပတ်နာရီ
ဦးမျိုးမြင့်ညိမ်းက အချုပ်ကားထဲကနေ မှာကြားပါတယ်။“ကျွန်တော် မကြာပါဘူး …
ကျွန်တော့် အယ်ဒီတာနေရာမှာ မညို ဝင်လုပ်ထားပေးပါ” မကြာဘူးလို့ သူယုံကြည်ခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။သူ့ “ မကြာဘူး ” ဆိုတာ (၁၃) နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပါတယ်။ သူပြန်လွ ...
.ခေတ်ဆိုးကြီးတခုကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ပြစ်မှုမြောက်ပါသလား။ အခုတော့ နံရံလေးဘက်ကြား အကျဉ်းခန်းလေးထဲ ကျနော် ရောက်ခဲ့ရသည်။ပြီးတော့ အဝါရောင် တစ္ဆေတကောင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်။ခေတ်ကြီးကို ကောင်းစေချင်သူများအား ထောင်ထဲထည့်သည့် ခေတ်ကြီးထဲ ...
ယောဟန်အောင် – ချစ်သူအတွက် စာတစောင်
.(၁)ထင်မှတ်မထားဘဲ ထိုင်းရုပ်ရှင်ကားလေးတကားကြည့်ရတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်လေးအကြောင်း အရင်ပြောကြပါစို့။ (The Letter) “ချစ်မေတ္တာစာ” လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပဲ။ အချစ်ဇာတ်လမ်း လေးပဲပေါ့။ မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ ဒျူး (Dew) (Ann Thongprasom) က အမေဆုံးသွားတဲ့အချိန်၊ ချင်း ...
ခင်လွန်း – သစ္စာပြိုသည့်ကမ်းပါးများ
.(၁)“ ဘာကွ ”သူ့အသံက ဟိန်းထ ခုန်ထွက်သွားသည်။ အဖြစ်က ငါးမန်းတကောင်၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံလိုက်ရသည့် လှေငယ်လေး တစင်းလို ဝရုန်းသုန်းကား ကယောင်ချောက်ချား။“ဟုတ်တယ်၊ ရှင် ရူးနေပြီ၊ ရှင်အခုဖြစ်လိုက်တဲ့ အမူအယာကိုက ရူးနေမှန်း သိပ်သေချာသွားပြီ။ ကျမပြောသလိုသာ ရ ...
မောင်သစ်ဆင်း – သူ့ခေတ် သူ့အခါ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်က ဘာသာပြန်ဝတ္တုလေးတပုဒ် ပြန်တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာ
ရေးသူက ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသား နိုဘယ်ဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဂါစီယာ မားကွက်စ်ပါ။ အဲဒီတုံးက စာပေစိစစ်ရေးကနေ ဘယ်လိုများလွတ်လာခဲ့တယ် မသိ။မောင်သစ်ဆင်း ဂါစီယာမားကွက်(စ) နို ဘယ်ဆုရ ...
ကျနော် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ လာအို ဝတ္ထုတိုလေးတပုဒ်ပါ။ အကြောင်းအရာကတော့ မိခင်တွေရဲ့ စိတ်ကိုဖွဲ့ထားတာပါ။ မူရင်းဝတ္ထုရေးသူနာမည်က Outhine Bounyavong ပါ။ ဝတ္ထုလေးရဲ့ အမည်က Mother’s Beloved ပါ။ မူရင်း လာအိုကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြန်ပြီး ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ပါ။ ၁၉၉၉ ဝ ...
ခင်မင်းဇော် –ပိုးထိုးသစ်သီးတလုံးရဲ့ ရာဇဝင် (၁)
နယ်စပ်မြို့ကလေးကနေကမ္ဘာကြီးကို မြင်နိုင်ဖို့ ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာသင်ယူခဲ့တာကတော့ မေမေ့ရဲ့ သမီးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေဖြစ်သလို သမီးကို သမီးအဖေ တော်တဲ့လူတယောက်က မသိဘဲ မွေးခဲ့တာကတော့ မေမေ့ရဲ့ အတ္တတွေမို့ သမီးနားလည်လာတဲ့တနေ့မှာ ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ် ထင်တာပါပဲ ...
အယူသည်းသူ – ယောဟန်အောင်
“သား... ကြောင်ကလေးကို အဲသည်လောက်ကြီး မဆော့နဲ့လေကွယ်။ ကြောင်ဆိုတာ အင်မတန်ဝဋ်လည်တတ်တယ်”မေမေက မီးဖိုးမှာ ထမင်းချက်ရာကနေ ကျနော့်ကို လှမ်းပြောတယ်။ ကျနော် ၆ နှစ်သား အရွယ်ပဲပေါ့။ ကျနော်ကတော့ ကြောင်ကလေးရဲ့ လက်တဖက်ကို တရွတ်ဆွဲပြီး လျှောက်ပြေးနေတယ်။ ကြောင ...
အောင်သာငယ်-မြို့တမြို့၊ နှစ်ချို့ဝိုင်တခွက်နဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတခု
သည်မြို့ရဲ့ အမည်ကို ကြားရတိုင်း ဖတ်ရတိုင်း တွေ့ရတိုင်း ရင်ထဲမှာသိမ်းထားခဲ့ဖူးသော ကောင်လေး တယောက်ကို သတိရသည်။ ကြာတော့ ကြာခဲ့ပြီ။ ဘယ်လောက်ကြာပြီဆိုသည်ကို နှလုံးသားက အတိအကျ မှတ်မိနေသည့်တိုင် အချိန်ကာလ အတိုင်းအရှည်တွေကို အမှတ်ထားကာ ပြောမပြချင်တော့။ ...
ပန်းချီဝဏ္ဏဇော်“အဖေ အဖေ … ဘညို ဘညို” အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပြစ်၌ ခြေပစ်လက်ပစ် အိပ်မောကျနေသော ကိုညိုဒင့်ကို ရွှေဘ လှုပ်နှိုးလိုက်သည်။ ကိုညိုဒင် ကိုယ်ကိုလူးလွန့် ၍ တဘက်သို့ လှည့်စောင်းသွားပြန်သည်။ ရွှေဘကလည်း ထပ်ပြန်တလဲလဲ လှုပ်၍ နှုတ်ကလည်း ဒရစပ်ခေါ်နေ၏။ “အင်” ဟု ...
Posted by: ကိုကိုအောင် (ရုက္ခ)
ရုံး ခန်းလေးထဲမှာ တိတ်ဆိတ်လို့နေတော့သည်။ ၀န်ထမ်းအားလုံး ထိုင်ခုံလေးတွေဆီမှာ ငူငူလေးတွေ ထိုင်နေကြလေသည်။ အစည်းဝေးခန်းရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ လေအေးစက်ရဲ့ အအေးဓာတ်လေးက ဆော့ကစား နေလေသည်။ နံရံထက်မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဦးမြသွင်ရဲ့ ဆီဆေး ပုံတူပန ...
ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ကျောသားနဲ့ ရင်သားကြားကမျက်ရည်များ – ကျော်ကျော် (မြရည်စမ်း)
(၁)ပျောက် သွားတဲ့ ကျွန် တော့် ဆိုင် ကယ် လေးကို ရှေ့ နေများရုံးခန်းထဲက ပြန် တွေ့တယ် လို့ ပြောရင် မျက် မြင် ဒိဌ သိလိုက် ရသူ တွေပဲ ယုံကြည် ကြပါတယ်။ ရှေ့ နေများရုံးခန်းဆို ပေမယ့်တရားရုံးအ ဆောက် အဦနဲ့ အတူတွဲ နေတာမဟုတ် ပါဘူး။ တရားရုံးမျက် နှာ ...
ငါးမရရေချိုးပြန်ပါမည် – မောင်လွမ်းဏီ
“ရွှေဘ ဘယ်သွားလဲ မိလုံး”ကိုညိုဒင် ငါးမျှားတံများကို အိမ်အဖီဘေးတွင်ထောင်ရင်း မလုံးကို မေးလိုက်သည်။ မလုံးက မကြားဟန်ဖြင့် မီးခိုးအူနေသည့် မီးဖိုကို မီးပြောင်းနှင့် တဟူးဟူး မှုတ်နေသည်။“ငါမေးတာလည်း ဖြေစမ်းအုန်းဟ မိလုံး”မလုံး တချက်မော့ကြည့်ပြီး ထမင်း အ ...
Posted by: ထက်မိုး
(၁)မတ်လ နွေရက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ၁၅ နှစ်ကျော် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြပါပြီ။ ကျွန်တော်က ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်လေတော့ တောထဲက (ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ နယ်စပ်မြေပေါ်က) ၁၅ နှစ် သက်တမ်းနွေဟာ လွမ်းစရာတွေကို ထမ်းထမ်းလာတတ်တယ်။အဲဒီသစ်ရွက်တွေ တဖြိုင်းဖြ ...